Thwebula Easy Taxi 9.9.2-b28 – Vessoft
Thwebula Easy Taxi
Taxi Easy – a software ukucinga ubize itekisi emazweni ahlukene. Isofthiwe ichaza indawo yomsebenzisi usebenzisa GPS futhi ekhombisa amatekisi eliseduze ukuthi ayatholakala ukubiza. Easy Taxi ikuvumela ukuba uxhumane ne umshayeli wetekisi ukubala amanani, isikhathi sokufika noma ukuxoxa neminye imininingwane uhambo. Isofthiwe ubonisa mouvement itekisi ebalazweni isicelo kanye lemali zanqwabelana taximeter ngesikhathi sangempela. Taxi Easy kwenza ukubuka ukuvakashelwa umlando, okuhlaziya kanye nokubuyekezwa umshayeli kusukela nabanye abagibeli. Isofthiwe ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Call Fast itekisi eliseduze
The ekubalweni amanani kanye isikhathi sokufika
Ukulandelela of the ukunyakaza itekisi ebalazweni
Buka ulwazi mayelana umshayeli
Amazwana on Easy Taxi:
Easy Taxi Ahlobene software:
English, Русский, العربية, Bahasa Indonesia... AdAway 3.2